အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ မျောက်ငိုသီး အများအပြား ဝယ်ယူမှုကြောင့် ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ်သန်း ?? - Yangon Media Group
အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ မျောက်ငိုသီး အများအပြား ဝယ်ယူမှုကြောင့် ၂ဝ၁၇ – ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ်သန်း ??
တမူး၊ ဇူလိုင် ၂ဝ
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် အရောင်းအဝယ် အကောင်းဆုံးနယ်စပ်ဈေးဖြစ်သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးမြို့နယ်စပ် နန်းဖာလုံဈေးမှ ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မျောက်ငို သီးတန် ၄ဝဝ ကျော်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျပ်သန်း ၂၆ဝ ကျော် ရရှိခဲ့ကြောင်း တမူးနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဇူလိုင် ၁၉ ရက်ကပြောသည်။
”တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တစ်ဖက်နိုင်ငံကဝယ်ယူမှုများလာသလို ဒေသတွင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအ နေနဲ့လည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးမှုကနေ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်း တမူးနယ် စပ်ရောင်းဝယ်မှုတွင် ကွမ်းသီးပြီးရင် မျောက်ငိုသီးကရာသီထွက် ကုန်စည်အနေနဲ့ အများဆုံးရောင်းရပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ ထုတ် ပြန်သည့်သတင်းများအရ ၂ဝ၁၆- ၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မျောက်ငိုသီး ၆၈ တန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျပ် ၆၈ သန်းရရှိကာ ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မျောက်ငိုသီးတန် ၄၄ဝ ဒသမ ၄ဝ၅ အ ရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျပ် ၂၆၄ ဒသမ ၁၆၂ သန်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မျောက်ငိုသီးကို ယခင်ဆယ် စုနှစ်များက ကလေး၊ ချင်းတောင်၊ တမူးဒေသတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လောက်သာ စိုက်ပျိုးမှုရှိသော်လည်း ယခုအခါ နာဂတောင်တန်း၊ ချင်းပြည်နယ် ကလေးဒေသနှင့် တမူးဒေသတို့တွင် စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုများရှိလာကြောင်းသိရသည်။
မျောက်ငိုသီးသည် နိုဝင်ဘာလမှစတင်အသီးပေါ်ပြီး တမူးနယ် စပ်ဈေးတွင် မိုးဦးရာသီအထိ မျောက်ငိုသီးရောင်းဝယ်မှုကို မြင် တွေ့ရကာ မျောက်ငိုသီးခြောက် နှစ်သားအပင်တစ်ပင်မှ တစ်နှစ်လျှင် အသီးရောင်းရငွေကျပ်တစ် သောင်းမှ ကျပ်နှစ်သောင်းအထိရရှိသည်။ ”နယ်စပ်နန်းဖာလုံဈေးမှာ မျောက်ငိုသီးကို ဆောင်းရာသီက နေစတင်ပြီး သင်္ကြန်ပြီးကာလအထိ အများဆုံးရောင်းရပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းကတော့ အနည်းအကျဉ်းလာရောင်းတာတွေ့ရပြီး မျောက် ငိုသီးတစ်တောင့်ကို အိန္ဒိယငွေနှင့် ၁ဝ ရူပီးပေးဝယ်ရတယ်။ မြန်မာ ငွေလဲနှုန်းက အိန္ဒိယ ၁ဝဝ ရူပီးကို မြန်မာငွေကျပ် ၁၉၅ဝ ဈေးရှိတယ်”ဟု တမူးနယ်စပ်နန်းဖာလုံဈေးမှ ဈေးသည်ကိုအောင်ဌေးက ပြောသည်။
ရှိမ်းမကား တောရကြီးကျောင်း ဘေးမဲ့တောရှိ သမင်များအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ထ?
လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် မကွေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့၌ နေအိမ်များ သွပ်အမိုး လန်??
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ စီမံကိန်းများအတွက် ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရာ?
အဓိက တိုက်စစ်မှူး ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ကို ၂ဝ၂၃ အထိ မန်ယူအသင်း စာချုပ်သက်တမ်းတိုး
မြဝတီ-ကော့ကရိတ်အမြန်လမ်းမကြီးတွင် မှန်လုံမော်တော်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်၊ ခရီးသည် ၁၅ ဦး ဒ